Mapisarema 90 Zvinoreva Vhesi Ndima | MINYENGETERO MARI
musha Munyengetero Mapisarema 90 Zvinoreva Ndima Ndima
Mapisarema 90 Zvinoreva Ndima Ndima
Nhasi tichave tichidzidza Mapisarema 90 zvichireva ndima nendima. Pisarema 90 rakanyorwa neMuporofita Moses. Mapisarema 90 anorondedzera zvakajeka kunaka kwaMwari uye anovhenekera pamusoro pe conundrum yehupenyu hwevanhu uye nesimba anopa izwi retariro kune kuvapo uye chinangwa chemunhu.
Pakutanga kweiri pisarema, Mwari anoziviswa sese hutiziro neMusiki. Nguva yaMwari zvakare yakaunzwa mumufananidzo ie nguva Yake ndeyokusingaperi, “kubva kusingaperi kusvika kusingaperi. Gare gare mundima yechitatu munhu akatsanangurwa kuti anofa kureva kuti rufu haugone, saka iro pisarema zvakare rinofananidza kusakwana kwaMwari uye kwenguva pfupi, yakapfuura pasi pano.
Zvinorehwa nePisarema 90 vhesi nendima
Ndima Yekutanga: Ishe, ndimi makagara nzvimbo yedu yekugara kwezvizvarwa zvese. Ndima iyi inotaura nezvekugara kubva pakutanga kwezvisikwa zvinoreva kuti Mwari inzvimbo yedu tsvene yekudzivirirwa, kutsigirwa, uye kugadzikana, ndiyo yatino tarisira kumusoro munguva dzekutambudzika nematambudziko. Muenzaniso weizvi Muporofita Mosesi; aizivikanwa kuva munyoro kwazvo uye zvinotsamira chose pana Mwari kunyangwe pamberi pegungwa dzvuku muna ekisodho 14 uye kunyangwe pavaive murenje. Saka ndima iyi inotitaurira sekungova ISHE zvavakapa zvese zvavanoda parwendo rwavo, Anotipa zvatinoda kana tichigara maAri. Iye ndiye chaiye Jehovha Jireh, anovapa. Tinofanira kudzidza chidzidzo kubva pane izvi.
Ndima yechipiri: Makomo asati azvarwa, kana musati matongosika pasi nevhu, kubva pakusingaperi kusvikira pakusingaperi, imwi muri Mwari.
Ndima iyi yechipiri inotaura nezvekukura kwaMwari. Kubva pakusingaperi kusvika kusingaperi ”: Hunhu hwa Mwari hauna mavambo kana magumo, wakasununguka kubva mukutevedzana kwenguva kwenguva, uye mune iyo chikonzero chenguva. Enzanisa (Map. 102: 27; Isa. 41: 4; 1 VaK. 2: 7; VaEf. 1: 4; 1 Tim. 6:16; Zvak. 1: 8, Joh. 1: 1-3).
Ndima yechitatu: “Munodzosera munhu kukuparadzwa; muchiti, Dzokai vana vavanhu.
“Unodzosera munhu kukuparadzwa”: Kunyange hazvo rakasiyana ne “guruva” ra (Gen. 3:19), uyu mutsara hapana mubvunzo kuti unoreva ndima iyoyo. Hunhu hunorarama pasi pechisimba chirevo cherufu uye haugone kuchipukunyuka. Iwe uri guruva, uye kuguruva uchadzokera. Munhu asina Mwari guruva. Tinogona kuona kubva muTestamente Itsva kuti hupenyu hwedu husingagumi hwakabva kuna Jesu (Adhamu wechipiri) .1 Vakorinde 15:45 "Uye zvakanyorwa kuti, munhu wekutanga Adhamu akaitwa mweya mupenyu; Adhamu wokupedzisira [akaitwa] mweya unoraramisa. “Pasina Jesu, tiri saAdamu wekutanga, nyama inodzokera kuguruva.
Ndima yechina: Mapisarema 90: 4 "Nokuti kwauri makore ane chiuru achangofanana nezuro, kana rapfuura, uye senguva yokurinda usiku."
“Nguva yekurinda husiku”: “wachi” maawa mana (enzanisa naEksodho 4: 14; Lameri 24: 2; 19Petirosi 2: 3). Izvi zvinoreva kuna Mwari, nguva hachizi chinhu. Izvo chete mukubata kwake nevanhu kwaAnofunga nezvenguva. Mamwe emadzitateguru akararama makore angangosvika chiuru; Mozisi ainyatsoziva izvi, uye akazvinyora: asi hupenyu hwakareba sei kuupenyu hwusingaperi Mwari haatongwe nenguva, sezvatiri, asi zviri nani kudzora nguva. Mazuva nemavhiki nemwedzi ndezvehupenyu huno, kwete zvekusingaperi. Kudenga kunogara Mwari, kune rimwe zuva risingaperi. Hakuna husiku zvachose.
Ndima yechishanu: Muchavabvisa ivo samafashama, vakaita sehope; mangwanani vakaita souswa hunomera.
"Semafashama ”: Vanhu vanodzurwa kubva pasi vachiita kunge vari kutsvairwa nemvura yemafashama. "Vakaita sehope": Hupenyu hwevanhu hunorarama huripo sekunge wakarara kana pakarara. Vanhu havana hanya nehukuru hwehupenyu uye hwechokwadi hwehasha dzaMwari. Mafashama anongoramba achiyerera, uye anotakurwa pamwe chete nawo; tichangozvarwa tinotanga kufa, uye mazuva ese ehupenyu hwedu anotitakura kufa kuri pedyo zvakanyanya.
Vhesi yechitanhatu: “Mangwanani hunotumbuka, hunomera; madekwani anotemwa, ndokusvava.
Munhu mangwanani ehuduku hwake anotaridzika kunge gay uye akanaka, anokura mukureba uye nesimba remuviri wake, uye masimba ehupfungwa hwake. Izvi zvakafanana chaizvo nehupenyu hwedu. Isu tinotumbuka kana isu tiri vana uye vachiri kuyaruka, asi nguva yekuchembera inosvika chaizvo, uye isu taenda. Hupenyu uhu hwakaita semhepo inovhuvhuta uye hwobva hwaenda. Hupenyu chete hwakakodzera kuraramira hupenyu hwokusingaperi naIshe wedu.
Ndima yechinomwe: "Nokuti tinopedzwa nehasha dzenyu, uye nehasha dzenyu tinotambudzika."
"Inotorwa nekutsamwa kwako": Miviri yenyama yevanhu inoburitswa nemutongo wekutonga kwaMwari pamusoro pezvivi zviri muchadenga, nerufu ndiwo mubairo wechivi. Mwari haana kumbobvira afungira kuti vanhu vararame kwenguva pfupi. Saka kufa kwedu hakuna kuita tsaona, kana kuti kwaive kusingadzivisike mukutanga kwechimiro chedu, asi zvivi zvakatsamwisa Ishe, uye nokudaro tinofa. Nekuti tinopedzwa nokutsamwa kwenyu. Tinotenda runako, Mwari vakatigadzirira nzira yekurarama nekusingaperi; Jesu ndiye Nzira. Zvino kana Mwari vakatitarisa, haana kutsamwa. Anoona jira chena yakanaka yerineni iyo Jesu yaakatipa mukutsinhana zvivi zvedu. Anoona vana Vake vakarerwa.
Ndima 8: “Makaisa zvakaipa zvedu pamberi penyu, zvivi zvedu zvakavanzika muchiedza chechiso chenyu.
"Chiedza chechiso chako": Zvivi zvese zvinonyatsoonekwa kune "uso "hwaMwari. Hakuna zvivi zvakamboitwa izvo Mwari zvaasina kuziva. Unogona kuvaviga pasirese, asi Mwari anoziva mumwe nemumwe wavo. Chiedza chake chinotsvaga moyo nemweya wemunhu uye unotiverengera sebhuku.
Ndima 9: “Nokuti mazuva edu ose anopfuura makatsamwa; tinopedza makore edu sengano [zvinotaurwa].
"Sezvinei": Mushure mekurarama kuburikidza neupenyu hwenhamo nematambudziko, hupenyu hwemurume hunopera nehupenyu hwenhamo nekuneta. Kana hupenyu hwedu hwave pedyo nemugumo, tinokwanisa kutarisa kumashure toona senge ipfupi nyaya yaakaudzwa. Mwari ngaarumbidzwe! Rufu rwedu izvozvi rwakafanana nekufamba kubva mune imwe kamuri yakanaka kuenda kune imwe tsvarakadenga.
Ndima 10: “Mazuva amakore edu anosvika makore makumi manomwe; kana tine simba makore makumi masere, asi simba ravo kutambudzika nokusuwa. nekuti rwunokurumidza kugurwa, nesu tabhururuka taenda.
“Makumi matanhatu emakore kana makumi masere” Nekuda kweichi chokwadi uye nekukurumidza magumo, hupenyu hunosuruvarisa. Moses arikuti makore makumi manomwe ndiwo hupenyu hwepanyama hwemunhu pasi pano. Vamwe vanhu vakasimba vanotorarama kusvika makumi masere, asi kunyangwe ipapo, ipfupi. Muzuva redu, vashoma vari kurarama kusvika pamakore zana, asi kunyange izvo kana zvichienzaniswa nekusingaperi, chinongova chiratidzo chimwe paawa yaMwari.
Ndima 11: “Ndiani anoziva simba rekutsamwa kwako? Kunyange zvakaenzana nokutya kwenyu, Saizvozvo nehasha dzenyu.
Hasha dzako, kutya kwako, nehasha dzako ”: Panzvimbo pekutsanangura kutuka kwehupenyu, munhu akangwara anozoona kutsamwa kwaMwari kuchivi sechikonzero chikuru chekutambudzika kwese nekudaro ndokudzidza kutya Mwari. MunaEksodho, takaona zvishoma zvishoma zvehasha dzaMwari, paakanyudza vaIjipita mugungwa.
Ndima 12: Naizvozvo tidzidzisei kuverenga mazuva edu, kuti tizviwanire moyo wakachenjera.
“Nhamba yemazuva edu”: Ongorora kushandiswa kwenguva muchiedza chechinhu chisvinu cheupenyu. "Mwoyo kune huchenjeri": Uchenjeri hunodzora kuzvitonga uye hwunotarisa kune hukuru hwaIshe nekuratidzwa. Chiitiko chinoita kuti mumwe munhu anyatso fungisisa nezve hupenyu hwake hune chinangwa.
Ndima 13: “Dzokai, ISHE, kusvikira rinhiko? Ngazvive pamusoro pako pamusoro pavaranda vako.
Dzokera kuvanhu vako; ratidza ngoni nekuvadzivirira. Zvinotaridza sezvingabvira kubva pane izvi kuti pisarema rakanyorwa munguva yedenda, kana chirwere chinopisa, icho chakatyisidzira kutsvaira vanhu vese. "Kusvika papi? Izvi zvichaenderera kwenguva yakareba sei? "Uye ngazvitendeuke iwe": Kureva, bvisa kutonga kwako, uye uve netsitsi sekunge watendeuka.
Ndima 14: “Haiwa unotigutisa mangwanani netsitsi dzako; kuti tifare, uye tifarisise mazuva edu ose.
Sezvo munhu wese achifanira kufa, nekufa nekukasira, munyori wepisarema anoteterera kukurumidza kunzwira iye nehama dzake. Varume vakanaka vanoziva kushandura iyo yakaoma miedzo kuva nharo pachigaro chetsitsi. Uyo ane asi moyo wekunamata haatombofaniri kuve asina kukumbira mumunamato. Chikafu chinogutsa chevanhu vaIshe inyasha dzaMwari; Tigutsei kamwechete, tinokumbira imi. Zuva redu rakapfupika uye husiku hunokurumidza, Tipei mangwanani-ngwanani emazuva edu kuti tigutsikane nenyasha dzenyu, kuti kubudikidza nezuva redu diki kuti tifare.
Ndima 15: Tifadzei zvinoenderana namazuva amakatitambudza, napamakore patakaona zvakaipa.
Munamato wekuti mazuva emufaro munhu ungafananidze mazuva ake ekutambudzika. Kunyangwe vana vaMwari vane kutambudzika muhupenyu huno. Dzimwe nguva kutambudzika kwakawanda kwaunako, ndiko kunobva kurumbidzwa kwazvo mubayiro wekudenga. Chimwe chezvinhu zvakanaka, pamusoro peizvi, ndiko kugamuchira kunoshamisa uko Jesu akapa Stefani mushure mekunge atakwa nemabwe kusvika afa.
Vhesi 16 “Basa rako ngarionekwe kuvaranda vako, nekubwinya kwako kuvana vavo.
Ndiro basa rako rinofadza rekupindirana. Ngatione simba rako richiratidzwa mukubvisa idzi njodzi, uye mukutidzosera mazuva ehutano nekubudirira "Uye kubwinya kwako kuvana vavo": Kuratidzwa kwehunhu hwako; kuratidzwa kwekunaka kwako, kwesimba rako, uye nenyasha dzako. Rega izvi zvipararire uye zvinoparadza zvakashata zviongororwe uye zvibviswe, kuitira kuti vana vedu vararame, uye vawane mukana wekupemberera kunaka kwako, uye nekunyora zvishamiso zverudo rwako. Uku hakusi kutaura nezve basa remunhu, asi basa raMwari.
Verse 17 “Runako rwaJEHOVA Mwari wedu ngaruve pamusoro pedu, uye musimbise basa ramaoko edu pamusoro pedu; musimbise basa ramaoko edu.
Runako rwaJehovha ”: Runako rwaIshe runoreva kunakidzwa kwake uye kutenderwa. Simbisai basa ramaoko edu ”: Nengoni dzaMwari nenyasha, hupenyu hwomunhu hunogona kuve nokukosha, kukosha, iko kunaka chaiko iko isu, ndi Kristu matiri.
TINOSHANDISAI IYO CHEMA
Pane here zvikamu zvezuva rako, zviitiko muhupenyu hwako, zvausingafunge kuti zvinoda kuve zvakatsaurwa zvinoenderana neIzwi raMwari nenzira? Sei? Vangaratidza sei kunobva kunetseka kwemweya muhupenyu hwako? Iri pisarema rinopindura mibvunzo yako
Iwe unosvika zuva rega rega sechinhu chakakumikidzwa iwe naMwari, chimwe chinhu kuti zvidyirwe mari zvakanaka kuhumambo Hwake? Iri pisarema rinokuratidza kukosha kwezuva rega rega ratinorarama.
Chii chakashata nemafungiro ekuti iwe unogona kugara uchiisa chimwe chinhu kusvikira mangwana? Iwe unoona sei kuti iwe haungambofa wakawana imwe, yakapedzerwa zuva rekudzoka? Kana kuti zvimwe iwe une mazuva mashoma asara pamberi pako pane atova kumashure? Iri pisarema richakudzidzisa kuti zuva rega rega ratinowana chikomborero, rishandise nehungwaru.
PSALM 90 MINAMATA
Baba ndinokutendai nerudo rwenyu rusingaperi pane hupenyu hwangu muzita raJesu Kristu
Baba ndinokumbira kuti tsitsi dzenyu dzikunde pakutonga muhupenyu hwangu nhasi muzita raJesu Kristu
Baba, ndipeiwo neMweya wekuziva izvozvi muzita raJesu Kristu.
Baba vhurai maziso angu emweya kuti vaone izvo maziso angu enyama asingaone muzita raJesu Kristu.
Baba, nekutungamira kweMweya Mutsvene, regedzai nhanho dzangu apo ini ndichifamba muRwendo rwehupenyu Jesu Kristu zita
Baba vhurai maziso angu kuti ndione zvakaipa zvisati zvandiwirira muzita raJesu Kristu.
Ini ndinoparura nhasi kuti mazuva angu evhiringidziro apera nemuzita raJesu Kristu
Ini ndinozivisa kuti mazuva angu ekupofumadzwa kwemweya apera nemuzita raJesu Kristu
Ini ndinoparidza kuti Mweya wekunzwisisa unoshanda muhupenyu hwangu muzita raJesu Kristu.
Baba Vekudenga, makataura mushoko renyu, muna James 1: 5 kuti kana chero munhu akashaya njere iye anokumbira iwe unopa pachena kune vese pasina anotuka. Ishe, saka ndinobvuma kuti ini ndoda huchenjeri hwamunongogona kupa, mudururire pandiri mweya weungwaru mune uzere hwazvo muzita raJesu.
Ishe ndinokumbira zvinoenderana nebhuku raVaEfeso 1 kubva pavhesi 16, kuti mundipe iwo mweya wehungwaru uye nekuzarurirwa muKuzivenyu imi, maziso emoyo wangu achivhenekerwa kuti ndizive tariro yekudaidzwa kwako uye nehupfumi hwekuda Nhaka yako inobwinya muvatsvene uye nehukuru hwesimba rako musimba rako kwandiri unotenda maererano nekushanda kwesimba rako guru muzita raJesu.
Baba Vekudenga, ini handidi kuramba ndichiita zvikanganiso nekutendeuka kwakashata muhupenyu, ndipe mweya wehungwaru uye hwehungwaru kuti ndizive iwo huchenjeri hwakavanzika hwakagadzirirwa kubwinya kwangu. IwoMweya Mutsvene Unotapira maererano nebhuku ra1cor 2, ndinokumbira kuti utsvage pfungwa dzaMwari uye kuti undizivise zvinhu izvi muzita raJesu.
Baba ndinokumbira zvinoenderana nebhuku raVaKorose 1: 9, ndinokumbira kuti mundizadze neruzivo rwe kuda kwenyu muhungwaru hwese uye nekunzwisisa kwemweya kuti ndiende ndinofanirwa naIshe, ndichimufadza zvizere uye ndichiwedzera mukuziva Mwari muzita raJesu.
Ishe, ndinokumbira kuti mundipe mweya unonzwisisa kuitira kuti ndigone kuita sarudzo dzakachena nguva dzese, kuti kunyangwe kana mirayiridzo yenyu ikaita seyakaipusa ndinozoiteerera zvakadaro, ndichiziva kuti vachandibatsira kurarama zvakananga pakati pesimba renyu. kuda muzita raJesu.
Previous nyayaMapisarema 86 Iwo Mharidzo Ndima Ndima
inoteveraMapisarema 150 Zvinoreva Ndima Ndima
Apostle fluker Kubvumbi 23, 2020 At 6:56 am
Kutenda kune wemasimbaose nekuda kwemunamato uyu ivo vari kuraira shanduko yehupenyu hwangu kuti ive nani muzita raJesu
Nzira shanu dzekukunda Kutya sevatendi
30 Kununurwa minamato Kubva kuMweya weUpenga
25 mfm munamato manzwi ematenga akazaruka
50 Hondo Yemunamato inonongedzera kurwisa urombo.